Hevitra MPANOHARIANA | Novambra 2011
2011-11-13 @ 15:40 in Ankapobeny
Alahady ny andro dia hiresaka feon-dakolosy ny tena. Amin'izao fotoana moa ny fiangonana no tena mampiasa izany feon-dakolosy izany. Toy ny zava-maneno rehetra dia azo anaovana feon-kira ihany koa ny lakolosy, indrindra moa fa ny amin'izao fotoana. Taloha dia ny fiangonana katolika irery ihany no nampaneno lakolosy misy feon-kira fa amin'izao fotoana izao efa misy ihany koa ny fiangonana protestanta (FJKM indrindra indrindra) manana ireny lakolosy mamoaka feon-kira ireny.
Ankehitriny moa dia monina akaiky fiangonana mampaneno lakolosy isaky ny amin'ny enina maraina ny tena. Efa zatra azy io ny mponina ety fa izaho kosa nahazo lesona avy taminy. Hitako lasa voasokajy telo ny olona eo am-panenoan'ny lakolosy vao maraina.
Ny sokajy voalohany dia ireo efa taitra, maneno mafy tokoa ilay lakolosy ary heno tsara ny feon-kira navoakany. Mampilaza ny olona izy izany fa amin'ny enina ora maraina izay. Filazana hafa ambadika dia hoe tongava manao vavaka maraina fa fanaovana izany izao.
Ny sokajy faharoa dia ireo mbola rendremana, toy ny heno izany ilay lakolosy nefa toa lavitra ny feony saingy izao: toy ny manako hatrany ilay feo-kira. Na dia efa nitsahatra aza ilay lakolosy dia manako any anatin'ireo rendremana rehetra ny feony, mety miverina indroa na intelo na inefatra aza. Anisan'ny mampiavaka ny lakolosy tokoa angamba izay toetrany manako any anaty izay: Antso fanairana ny rendremana!
Ny sokajy fahatelo dia ireo renoka tanteraka! izaho rehefa tena renoka fa tsy mahare na inona na inona fa asa ianareo na toa ahy. Tsy misy lakolosy heno izany, tsy misy manaitra... Izay fotsiny no tiako resahina fa anjaran'ny tsirairay ny manitatra an!
Jentilisa 13 novambra 2011, amin'ny 17:37